Fiarahana mampiaraka - Torohevitra tsotra ho an'ny lehilahy
Betsaka, miomana amin'ny daty iray, no manadino ny fitsipi-dàlana faran'ny fiomanana ho amin'izany sy ny fitondran-tena eo aminy. Taonjato faha-21 dia toa izany - inona ny fitsipika, saingy misy tovovavy vitsivitsy izay tia - lehilahy voadio, tsara fitondran-tena sy manan-tsaina. Alohan'ny handavana sy hilaza fa tsy mila izany ianao dia apetraho amin'ny tenanao ny fanontaniana - lehilahy ve ianao? zazalahy? sa lehilahy? ary eritrereto ny mahasamihafa azy!
Voninkazo amin'ny daty voalohany - ilaina sa tsia?
Tsy voatery io amin'ny daty voalohany. Ohatra, raha tsy mandeha tsara izany dia ho menatra fotsiny ilay tovovavy amin'ny fehezam-boninkazo avy amin'ny bandy tsy dia manintona azy loatra. Fanao ny manome voninkazo an'ireo izay tia anao, izay efa anananao fifandraisana akaiky.
Soso-kevitra iray, raha nandeha tsara ny daty voalohany, dia afaka manome izany fihetsika mahafinaritra izany ianao, amin'ny endrika fehezam-boninkazo, ny ampitso, kokoa amin'ny maraina. Azonao atao ny manisy naoty aminy ary manoratra fa tsara tarehy ny hariva, ary tsy ho ela ianao dia manantena ny hahita azy indray ary miantso azy amin'ny hariva. Aleo mampiasa ny serivisy fanaterana ary mandefa voninkazo amin'ny alàlan'ny mpandefa hafatra. Tena ho faly amin'ny fihetsika toy izany ny zazavavy, ary handany ny tontolo andro izy amin'ny fiandrasana ny antso hariva.
Manaratra, manasa, ary manimbolo no fototry ny fahombiazan'ny fiarahana.
Amin'ity andro manan-danja ity dia tsy maintsy manana fofonaina madio ianao, akanjo madio madio, fantsika deodorant maharitra, hoho madio sy madio. Noho izany dia afaka manaporofo tsara ny tenanao amin'ny tovovavy mbola tsy fantatra ianao.
Aza tara mihitsy - tsy tian'ny ankizivavy izany
Miankina aminy avokoa ny valin'ny datin'ny datinao. Aza miandry ny zazavavy hiandry! Raha raisinao izy dia aza tonga aloha. Mety mbola tsy vonona izy - avy eo dia hiandry ianao, ary ho sahiran-tsaina izy ary ho maika.
Derao ny zazavavy
Raha vantany vao mahita azy ianao dia lazao azy ny hatsarany. Lazao amiko ny hatsaran'ny akanjo manasongadina ny lokony sy ny lokon'ny masony. Ahoana no mety aminy ity taovolo ity ary tsara tarehy / mahavariana izy, sns.
Rehefa dinihina tokoa, ny zazavavy dia manahy mafy amin'ny daty voalohany momba ny fitafiany, ny bika aman'endriny ary raha tian'ilay tovolahy ny akanjony. Na dia tsotra aza fankasitrahana dia hanafoana ny fisalasalany rehetra momba ny bika aman'endriny, afaka miala sasatra izy ary ho tsara ny hariva.
Miezaha ho tena tompokolahy
Aza adino ny mamela azy handroso, hihazona ny varavarana, ho fahalalam-pomba. Raha ao anaty fiara ianao, sokafy ho azy ny varavarana, dia avy eo miditra ao aminao. Ny tovovavy dia tena tia ny tsara amin'izy ireo.
Henoy izay holazainy ary mametraha fanontaniana
Zava-dehibe aminy avokoa izay lazainy. Tena ho faly izy raha mihaino azy ianao, mametraha fanontaniana roa, maneho ny fahaliananao amin'ny tantarany.
Aza miresaka zavatra ratsy
Tsy tokony hiresaka zavatra tsy mahafinaritra amin'ny olon-tianao ianao. Aza miresaka momba ny zava-niainanao tamin'ny fahatanoranao, momba ireo mpidoroka zava-mahadomelina olom-pantatrao. Aza mihomehy olona na mifanakalo hevitra momba azy ireo. Aza adino, ny fanamafisana ny tenanao amin'ny volan'ny hafa, fifosana, fihoarana ny tombony azonao, endrika ratsy io.
Ny "mitaingina" toy izany dia tsy misy afa-tsy amin'ny tovovavy na tovovavy adala miharihary izay liana amin'ny volanao fa tsy amin'ny fifandraisana. Ary ny resaka mifosa momba ny hafa dia olana iray misaraka - fialamboly ho an'ny ankizivavy fa tsy lehilahy, mandinika izany izy ireo, ary ity dia minus mazava fa tsy miampy ho an'ny lehilahy!
Iza no handoa ny faktiora?
Raha mamela ny ara-bola dia ataovy izany. Ity dia endrika tena tsara. Raha manolo-kevitra izy hizara roa ny vola dia avelao izy. Tsy isalasalana fa hankasitraka ny hetsika nataonao izy.
Ity olana ity dia tokony halamina arakaraka ny fisarihana ny lahy sy ny vavy. Ny daty dia nandeha niaraka tamin'ny baomba, ary tsy te hody haingana kokoa ilay tovovavy? Ity no ho oroka voalohany sy tsy hay hadinoina nandritra ny fotoana ela.
Hiantso sa tsy hiantso?
Avereno tsara indray, tsarao ny fizotran'ny daty. Alohan'ny hiantsoanao dia eritrereto izay lazainao. Mitenena amin'ny feo voaofana tsara sy matoky tena. Tsy miresaka amin'ilay mpampianatra ianao sao manahy.
Mahaliana ny mamaky:
Ny tantaran'ny etika nanomboka tamin'ny antitra ka mandraka ankehitriny
Inona avy ireo vokatra tokony horoahina alohan'ny daty manokana
Fitsipika fototra momba ny fahamoram-panahy sy ny fitsipi-pitondran-tena
Ahoana no tokony hifaranan'ny daty voalohany tonga lafatra?
Posted in fiarahana, fitiavana, fifandraisana
Tsy ho navoaka ny adiresy mailakao. Mitaky saha dia marika *
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,479.